လူထုဦးလှ - ဝီကီပီးဒီးယား
(လူထု ဦးလှ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
လူထုဦးလှ (၁၉၁၀–၁၉၈၂)ကို ပဲခူးတိုင်း ညောင်လေးပင် မြို့နယ် ပုစွန်မြောင်း ရွာတွင် အဖ ကုန်သည် ဦးပု၊ အမိ ဒေါ်ခိုင် တို့မှ ၁၉၁၀ ခု ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၇:၄၅ နာရီတွင် မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း သုံးယောက်တွင် အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ မောင်လှ ဖြစ်သည်။ ပုစွန်မြောင်းရွာ ဆရာ ဦးဖေခိုင် ကျောင်းတွင် ၄ တန်းအထိ ပညာ သင်ယူ ခဲ့သည်။ ၁၉၂၆ တွင် ညောင်လေးပင်မြို့ အာစီအမ် (ရိုမန်ကက်သလစ် သာသနာပြု) ကျောင်းမှ ခုနစ်တန်း အောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကုန် အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်းမှ ၁၀ တန်း အောင်ခဲ့သည်။
(1910-01-19)၁၉ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၉၁၀
ပဲခူးတိုင်း၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပုစွန်မြောင်းရွာ
၇ ဩဂုတ်၊ ၁၉၈၂(1982-08-07) (အသက် ၇၂)
ဦးပု + ဒေါ်ခိုင်
လူထု၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်၊ ၈၄နှင့် ၃၃ လမ်း၊ မန္တလေး
လူထု ဦးလှ (၁၉၁၀ - ၁၉၈၂)
ဆယ်တန်း အောင်ပြီးနောက် စာရင်းကိုင် စာရေး သင်တန်း တက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တက်နေရင်း မှာပင် လူငယ်များ ကြီးပွားရေး အသင်း သတင်းများကို သတင်းစာ များသို့ ပေးပို့ ခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ တွင် ဘောလုံးသမား တဦး အဖြစ် မြူနီစီပယ်တွင် ရာပြတ် အင်စပက်တော် ဝင်လုပ် ခဲ့သည်။ တပြိုင်တည်း မှာပင် လူငယ်များ ကြီးပွားရေး အသင်းတိုက် စာကြည့်တိုက်မှူး၊ လူငယ်များ ကြီးပွားရေး အသင်း ညကျောင်း ဆရာ အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၃၂ တွင် "ကြီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း" ထုတ်ဝေသည့် အခါ စာ စရေး ခဲ့သည်။ ၁၉၃၃ တွင် "ကြီးပွားရေး လမ်းညွှန် မဂ္ဂဇင်း" ထုတ်ဝေသည့် အခါတွင် "ကြီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း" ကို မန္တလေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။ စစ်အတွင်း၌ မဂ္ဂဇင်း ရပ်ဆိုင်း ထားပြီး ကိုယ်ပိုင် စာအုပ်များ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုကာလ အထိ 'ကြီးပွားရေး မောင်လှ'၊ 'ကြီးပွားရေး အယ်ဒီတာ မောင်လှ' ကလောင် အမည်များကို အသုံးပြု ခဲ့သည်။
လူထု ဂျာနယ် ၁၅ ရက် တကြိမ်ထုတ်ကို ၁၉၄၅ တွင် လည်းကောင်း၊ လူထု သတင်းစာကို ၁၉ ဧပြီ ၁၉၄၆ တွင် လည်းကောင်း စတင် ထုတ်ဝေသော အခါ "လူထုဦးလှ" ကလောင် အမည် တွင်လာ ခဲ့သည်။ ၁၉၅၁ - ၅၂ တွင် လူထု ဂျာနယ်နှင့် သတင်းစာကို ပူးတွဲ ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။ ထိုအခါမှ စ၍ သတင်းစာ ဂျာနယ် လုပ်ငန်းကို ဇောက်ချ လုပ်ကိုင် ခဲ့သည်မှာ ၇ ဇူလိုင် ၁၉၆၇ တွင် လူထု သတင်းစာ ရပ်ဆိုင်း သွားခဲ့သည် အထိပင် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် လုံးချင်း စာအုပ်များ ကိုသာ ဆက်တိုက် ရေးထုတ် ခဲ့သည်။
စာပေနှင့် လူထု လူတန်းစား အဖွဲ့အစည်း များတွင် ပါဝင် ခဲ့သည်။ စာရေးဆရာ အသင်း အမှုဆောင် (၁၉၃၇) မန္တလေး အာဇာနည် ၁၇ ဦး ဈာပနသို့ စာရေးဆရာ အသင်း ကိုယ်စားလှယ် (၁၉၃၈) ၊ ဂျပန်ခေတ် စာရေးဆရာ အသင်း အဝေးရောက် အမှုဆောင်၊ အာရှ လူငယ် အသင်း ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၄၃)၊ အထက် မြန်မာနိုင်ငံ ဖဆပလ အဖွဲ့ ဝါဒ ဖြန့်ချိရေးမှူး (၁၉၄၅)၊ အထက် မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၄၇)၊ ဗထူး အားကစားကွင်း ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၅၀) တာဝန် များကို ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ် အသင်း ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ခဲ့ သောကြောင့် ၁၉၄၅ တွင် ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့၏ အဖမ်းဆီး ခံရခြင်း အပါအဝင်၊ ဖဆပလခေတ်၊ မဆလ ခေတ်တို့၌ ၅ ကြိမ်တိတိ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ ရသည်။
သတင်းစာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ၁၉၅၂ တွင် ဆိုဗီယက်၊ တရုတ်၊ ချက်၊ အရှေ့ဂျာမနီ၊ ၁၉၅၇ တွင် သီရိလင်္ကာ၊ ၁၉၆၀ တွင် အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်နှင့် အနောက် ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ ၁၉၆၂ တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ များသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။
၁ ရရှိခဲ့သော ဆုများ
၂ ထင်ရှားသော စာပေလက်ရာများ
ထောင်နှင့် လူသား ဖြင့် ၁၉၅၇ ခုနှစ် စာပေဗိမာန် စာပဒေသာဆု၊ လှောင်ချိုင့်တွင်းမှ ငှက်ငယ်များ ဖြင့် ၁၉၅၈ ခုနှစ် ယူနက်စကို စီးပွားရေး လူမှုရေး ဆိုင်ရာဆု၊ ရခိုင် ကျေးလက် ပုံပြင်များ ဖြင့် ၁၉၆၃ ခုနှစ် စာပေဗိမာန် အနုပညာ စာပေဆုတွင် ကလေး သူငယ် ဆိုင်ရာ စာပေ ဒုတိယဆုများ ရရှိ ခဲ့သည်။
သတင်းစာ ဆရာ၊ စာရေးဆရာ ဖြစ်သည်နှင့် လျော်ညီစွာပင် စာမျိုးစုံ ရေးသား ခဲ့သည်။
ဆိုဗီယက် ရုရှား (၁၉၃၈)၊
ရွှံ့နှင့် စစ်သား (၁၉၄၂)၊
ပန်းနှင့် စစ်သား (၁၉၄၂) စသည့် ဘာသာပြန် စာအုပ်များ၊
လေနှင့် အတူ (၁၉၅၇)၊
ထောင်နှင့် လူသား (၁၉၅၇)၊
လှောင်ချိုင့်ထဲမှ ငှက်ငယ်များ (၁၉၅၈)၊
အားလုံး ကောင်းကြရဲ့လား (၁၉၅၉)၊
စစ်၊ အချစ်နှင့် ထောင် (၁၉၆၀)၊
စစ်ပြီးစက ထောင်တံခါး (၁၉၆၈) စသည့် ထောင် အတွေ့အကြုံ စာအုပ်များ၊
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ စ၍ ထုတ်သည့်
ကရင်ပုံပြင်များ (၁၉၆၂ - ၆၆)၊
ရခိုင် ကျေးလက် ပုံပြင်များ (၁၉၆၃ - ၆၈)၊
မွန် ပုံပြင်များ (၁၉၆၄ - ၆၈)၊
မြန်မာ ပုံပြင်များ (၁၉၆၅ - ၆၈)၊
လီဆူး ပုံပြင်များ (၁၉၆၈)၊
ရဝမ် ပုံပြင်များ (၁၉၇၀)၊
လိုင်းနောင် နာဂ ပုံပြင်များ (၁၉၇၁) စသည့် တိုင်းရင်းသား ပုံပြင် စာအုပ်များ၊
ဂျပန်ပြည် တခေါက် (၁၉၆၂)၊
အင်ဒိုနီးရှား အနောက်မှ အရှေ့သို့ (၁၉၆၃)၊
နာဂ တောင်တန်း တစေ့တစောင်း (၁၉၆၇) ခရီးသွား စာအုပ်များ၊
သတင်းစာများသည် သမိုင်းကို ပြောနေကြသည် (၁၉၆၃)၊
သတင်းစာများ ပြောပြတဲ့ စစ်တွင်း မြန်မာပြည် [လေးတွဲ] (၁၉၆၈)၊
သတင်းစာများ ပြောပြတဲ့ စစ်ပြီးစ မြန်မာပြည် [ပထမတွဲ] (၁၉၆၉) စသည့် သမိုင်းနှင့် သတင်းစာ မှတ်တမ်း စာအုပ်များ၊
ကျွန်တော် ဗြူရိုကရက် (၁၉၇၀)၊
ကျွန်တော် စတီးပွဲစား (၁၉၇၀)၊
ကျွန်တော် သတင်းထောက် (၁၉၇၁)၊
ကျွန်တော် မြင်းသမား (၁၉၇၂) စသည့် "ကျွန်တော်......" စာအုပ် များမှာ ထင်ရှားသည်။
၁၉၈၂ ခု ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၈:၁၅ နာရီတွင် မန္တလေးမြို့၌ ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။
↑ ရာပြည့် ဦးစိုးညွန့် (ဇူလိုင် ၂၀၀၅)။ ၂၀ ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ ၁၀၀ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း။
↑ ဒဂုန်ရွှေမျှား။ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေဆုများ။ p. ၆၄-၆၆။
↑ မလိခ။ မြန်မာဝတ္ထု အညွှန်း(၄)။ p. ၇၃-၉၄။
↑ နေထွတ်။ မန္တလေး အဘိဓာန်။ p. ၃၀၄-၃၀၅။
↑ နတ်နွယ်။ မိမိနှင့် စာရေးဆရာများ။ p. ၉၀-၉၆။
↑ ပြန်/ဆက် စာတည်းအဖွဲ့။ နှစ်ဆယ်ရာစု မြန်မာ စာရေးဆရာများနှင့် စာစုစာရင်း။ p. ၂၇၆-၂၈၁။
↑ မန္တလေးနှင့် စာပေခရီး။ ဇွန် ၁၉⁠၉၈။ p. ၅၉-၆၀။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ မြန်မာ စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ်။ ၁၉၈၃။ p. ၂၈၀-၂၈၁။
↑ ရှုမဝ စာတည်း အဖွဲ့ (စက်တင်ဘာ ၁၉၈၂). "ဝမ်းနည်း မှတ်တမ်း". ရှုမဝ.
↑ "စာရေးဆရာ လူထုဦးလှ ကွယ်လွန်" (၈ ဩဂုတ် ၁၉၈၂). လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ်.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လူထုဦးလှ&oldid=632051" မှ ရယူရန်
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။